တစ်မိသားစုလုံး ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရပြီး ခင်ပွန်း သေဆုံးခဲ့တဲ့ အပြင် နောက်ဆုံး အမှတ်တရ အချစ်တော်ခွေးလေးပါ ဆုံးရှုံး ရမယ့် အဖြစ်…. – Let Pan Daily
တစ်မိသားစုလုံး ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရပြီး ခင်ပွန်း သေဆုံးခဲ့တဲ့ အပြင် နောက်ဆုံး အမှတ်တရ အချစ်တော်ခွေးလေးပါ ဆုံးရှုံး ရမယ့် အဖြစ်….
ဂျက်ဂီလေး ကျမတို့မိသားစု ဆီပြန်လာနိုင်ရန် ဆုတောင်းပေးသောမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အတူနေရဖို့ ဆက်လက်၍ဆုတောင်းပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ မနေ့ကကျမရဲ့တူလေးကဂျက်ဂီကိုလက်ခံ‌ကျွေး‌မွေးထား‌သော ဆရာဝန်ဒေါက်တာအန်တီနဲ့ အဆက်အသွယ်ရပီးယနေ့၂၆.၅.၂၀၂၀ ညနေ၄နာရီအချိန်တွင် ဂျက်ကီလေးအားပြန်လည်ရမဲ့အထင် နဲ့သွားရောက်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။ ဆရာဝန်အန်တီရဲ့သဘောတူညီချက်အရ ဂျက်ကီကိုကျမတို့ခေါ်လို့လိုက်လျှင်ခေါ်ယူသွားနိုင်ကြောင်း မလိုက်လျှင်ဆရာမကြီးအားပေးပါမယ်ဆိုပီးဆရာမကြီး ဘက်ကိုကြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့ရောက် လာတဲ့အချိန်တွင်ဂျက်ကီလေးလဲမပါလာခဲ့ပါ၊ အဝေးကနေမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ သွားခဲ့ပါတယ်။ ရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းပီးအပြင်မှာQဝင်တဲ့ရက်ပါပြည့်ပီးခဲ့သော်လဲ မလိုလားအပ်သောပြသနာဖြစ်မှာဆိုးလို့အပြင်မထွက်ခဲ့ပါ။ ဂျက်ကီလေးအတွက်မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်လာခဲ့ရသော်လဲလက်တွေ့မှာဂျက်ကီလေးမပါလာတဲ့အပြင် ဒေါက်တာအန်တီနှင့်အတူ ကိုသန့်စင်အပါအဝင်လူ၈ယောက်ခန့်ကား၃စီး နဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျမကလဲလူ၅ယောက်ထက်ပိုမစုဝေးရဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ကျမနှင့်အတူ ၊ကျမတူ‌လေး၊ကျွန်မတို့ကိုကားမောင်းပို့ပေးတဲ့ကျမအကိုပဲပါခဲ့ပါတယ်
အသက်၁၀နှစ်အောက်ကလေး၂ယောက်ပြန်ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလူ၈ယောက်နဲ့စကားပြောနိုင်သူဆိုရင် ကျမရယ် ကျမတူလေးရယ်ပဲရှိတာပါ။ဂျက်ကီလေးမပါလာပဲ ညိုနှိုင်းမဲ့ အကြောင်းခွေးလေး တစ်ကောင်အစားပြန်ပေးမဲ့ အကြောင်းပဲပြောနေပါတယ်နောက်ဆုံးစကားပြောလို့အဆင်မပြေတဲ့အဆုံးမှာ အန်တီဒေါက်တာကသူပင်ပန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းနောက်နေ့မှ ပြောမယ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျမ လက်မလျော့ပဲနောက်တစ်ကြိမ်ဆရာမကြီးကားနောက်လိုက်ပီးတောင်းပန်ပီးထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆရာမကြီးပြောတာက လုံးဝမဆက်သွယ်ပါနဲ့သူလူတွေ နဲ့သာဆက်သွယ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားရင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ကျမရဲ့သားလေးရယ်ကျမရယ်ရင်ထဲအဆင်မပြေတော့လို့မျက်ရည်တွေနဲ့သာတွေ့ဆုံမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျမသည်ကျမရဲ့အိမ်ထောင်ဦးစီးကိုဆုံးရှူံးခဲ့ပီးပါပြီ၊ကျမခင်ပွန်း ရဲ့ကိုယ်ပွားလေးကိုတော့မဆုံးရှုံးချင်‌‌တော့ပါဘူး။ ကျမရဲ့သားလေးသည်ဆေးရုံတက် ကတည်းကဂျက်ကီကိုခေါ်ပေးဆိုတာကြီး ပဲပြောနေခဲ့ပါတယ်။ယခုအချိန်ထိနေ့ရက်တိုင်းလဲ မျက်ရည်ကျရပါတယ်ပူလောင်နေရပါတယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင် သားကြီးဝမ်းနည်းမှုကတော်တော်ကြီးမားနေပါတယ် ဂျက်ကီလေးပြန်လာမယ်ဆိုလို့တောင်ဟင်းတွေချက်ထားဖို့ပူဆာနေခဲ့တာပါ။ကျမမိသားစုတန်းဖိုးထားရတဲ့အရာတွေကိုထပ်ပီးမဆုံးရှံးုချင်တော့ပါဘူး။ လူတွေထင်သလိုအိမ်စောင့်ခွေးလဲမဟုတ်ခဲ့ပါ။ ကျမရဲ့ ခင်ပွန်းသွားလေရာခေါ်သွားပါတယ်အကောင်းဆုံးထားတယ်ဆိုတာကျမခင်ပွန်းတာဝန်ကျရာမြို့ကမိတ်ဆွေတိုင်းသိပါတယ်။ ကျမခင်ပွန်းရုံးပိတ်ရက်ရန်ကုန်ပြန်လာတိုင်းကျမတို့မိသားစုအခန်းထဲမှာနေပီးကလေးတွေနဲ့ပျော်ရွင်စွာဆော့ကစားတဲ့ဂျက်ကီလေးပါ။ကျမသည်လဲဂျက်ကီအားမိသားစုတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကျမခင်ပွန်းကလဲမိသားစုအကြောင်းဖုန်းပြောတဲ့အချိန်ဆိုဂျက်ကီအကြောင်းအမြဲပါပါတယ်။
ကျမသည်ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးအားဖြတ်သန်း ခဲ့ရတဲ့အတွက်အချို့သောလူတွေနဲ့အတိုက်အခံ မဖြစ်အောင်နေချင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာမပြောပြပဲ ထားချင်ခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေတော့လို့ပါ။ဂျက်ကီက ကျမတို့မိသားစုကိုလွမ်းနေမှာပါ၊ကျမတို့မိသားစုပူလောင်ခြင်းများစွာ နဲ့ဂျက်ကီကိုလွမ်းနေပါတယ်။ကျမတို့မိသားစုအတွက်ကျမတို့မိသားစု ဝင်ဂျက်ကီလေးလိုအပ်ပါတယ်၊ယခုမှပြန်လည်တည်ဆောက်နေတဲ့ကျမတို့မိသားစု ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးကြပါ။ ယခုညဆရာဝန်အန်တီအားဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကီအားကျမကို မတိုင်ပင်အကြောင်းမကြားပဲသူကိုလာပေးသောကိုသန့်စင်ဆိုသူအားယခုညပြန်လည်ပေးအပ်လိုက်ပီးဂျက်ကီအားစွန့်လွတ်လိုက်ပြီဟုပြောပါတယ်။
ကိုသန့်စင်ကိုဒီနေ့မှတွေ့ဖူးသော်လည်းစကားပြောရာတွင်စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါ၊ယခုလက်ရှိဂျက်ကီအားယူထားသောကိုသန့်စင်ကိုညိုးငယ်သော စိတ်ထားဖြင့်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ ဂျက်ကီလေးအားယခုချက်ချင်းပြန်လိုချင်ပါတယ် ကျမရဲ့သားလေးကျမတို့မိသားစုအတွက်သနားသောအားဖြင့်ပြန် လည်ပေးအပ်ပေးပါ။ အခြေအတင်လဲစကားမများချင်ပါဘူး၊အေးချမ်းစွာပျော်ရွင်ခြင်းနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။
အဖေမရှိတော့လို့ဒီလိုဖြစ်တာ ဆိုတဲ့သားလေးရဲ့စကားကို အဖေမရှိ‌တော့ပေမဲ့အမေတစ်ယောက် အနေ နဲ့ သူတို့‌လေး‌တွေရဲ့ရှေ့မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပြီး ဂျက်ဂီကို ရအောင်ခေါ်ပေးပါရစေ။ စေတနာဖြင့်စောင့်ရှောက်ခဲ့သောဆရာဝန်အန်တီမှစွန့်လွတ်လိုက်ပီးဖြစ်သောကြောင့် ယခုဂျက်ကီအားလက်ဝယ်တွင်ရှိသောကိုသန့်စင်ဂရုဏာစိတ်ပရဟိတစိတ်ဖြင့်ဂျက်ကီအားအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံး အဆင်ပြေသွားမှာပါ အန်တ‌ီကိုတွေ့ပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်ညှိပါလို့ ကိုသန့်ဇင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အန်တီဒေါက်တာကသူစွန့်လွတ်လိုက်ပါပြီဟု‌ ပြောသည့်အတွက်‌ကြောင့်ဂျက်ဂီကိုလာ‌ခေါ်ခွင့်ပြုပါ။ ဂျက်ကီအားသတ်ဖို့မပြောခဲ့သလိုမည်သူကိုမှပေးဖို့မပြောခဲ့ပါ။ ဂျက်ကီအားကယ်တင်ပေးခဲ့သောကိုအောင်ကျော်မိုးနှင့်ဂျက်ဂီအား မိမိပိုင်ခြံတွင်စေတနာဖြင့်လက်ခံ၊စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သောညီမလေးနှင်းအိ၊ ဂျက်ကီလေး အားဂရုဏာစိတ်သားသမီးစိတ်စေတနာဖြင့်‌ကျွေး‌မွေး‌စောင့်‌ရှောက်‌ပေးခဲ့‌သောဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်လင်းသူတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ဆင်ပြီး စိတ်မကောင်းခြင်း များစွာဖြင့် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ တဲ့ အမေစု သားငယ်ကင်မ် ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
(၄၈) နာရီ အတြင္းျဖစ္ေပၚလာ မယ့္ မုန္တိုင္း သတင္း ပါ..အေရးႀကီး လို႔ ဖတ္ၾကည့္ၿပီး မၽွေဝေပးပါ
အလွျပင္ဆိုင္ လို အေရျပား ေဆးခန္းလို နဲ႔ ဂ်င္းထည့္ေန တဲ့ မႏၲေလးက တ႐ုတ္ေဆးခန္းေတြ
ဖြူဖွေးဝင်းဥတဲ့ အသားအရေလေး မှာ ဖွံ့ထွား လှပတဲ့ အလှတရားတွေ အထင်အရှား ပေါ်လွင်နေ တဲ့ ရွှေပိုးအိမ်
အတွင်း အလှတွေ ပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီကျကျ ရိုက်ကူး ထားတဲ့ လုလုအောင် ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို
ညီမလေး ရဲ့ စိမ်းစိမ်းကားကား အသည်းခွဲခြင်းကို ခံရလိုက်ရဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ကြီး (အသည်းတွေ ကွဲပါပြီ)